Ny milina fanodinana CNC dia milina fanodinana herinaratra miaraka amin'ny mpanara-maso CNC (Computer Numerical Controlled), izay ampiasaina hanamboarana endrika 2D / 3D na lamina amin'ny fitaovana isan-karazany. Ny fikosoham-baravarankely dia fomba famolavolana CNC mitovy amin'ny sary sokitra sy ny fanapahana ary afaka mahatratra ny hetsika maro tanterahan'ny milina fanapahana sy sokitra. Toy ny sary sokitra, ny fikosoham-bary dia mampiasa fitaovana varingarina mihodina. Na izany aza, ny fitaovana ao amin'ny fikosoham-bary CNC dia afaka mivezivezy amina axis marobe, ary afaka mamorona endrika, slot ary lavaka isan-karazany. Ho fanampin'izany, ny workpiece dia matetika afindra amin'ny fitaovana fikosoham-bary amin'ny lalana samihafa. Mba hahazoana atmosfera eny an-tsena bebe kokoa, Chapman Makerny orinasa dia manambola hatrany amin'ny fitaovana fanodinana haingam-pandeha. Manana andiana fitaovana fikirakirana MAKINO haingam-pandeha 4 avy any Japon izahay, izay mety hahatratra 0,005-0.01mm ny marina.
Ho fanampin'izany, manana milina CNC 4 ihany koa izahay ho an'ny semi-finina sy ny 2 miketrika.
Chapman MakerNy fitaovana fanodinana CNC dia afaka manome ny filanao fanodinana rehetra, tsy ny sisiran'ny bobongolo fotsiny, ny banga amin'ny bobongolo, ny faritra bobongolo, fa afaka manome serivisy fanodinana CNC ho an'ny faritra betsaka ho an'ny mpanjifa mandeha ho azy ihany koa izahay.
Ny famokarana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra (EDM), fantatra ihany koa amin'ny hoe «milina» spark, dia teknolojia efa nisy hatry ny ela. Mandritra ny fizotran'ny EDM, ny onja elektrika iray dia asaina mandalo eo anelanelan'ny electrode sy ny workpiece izay nosarahan'ny ranoka diélectrique, izay miasa ho insulator elektrika. Raha vantany vao ampidirina amin'ny herinaratra avo lenta dia aody ny ranoka diélectrique ary miova ho mpamokatra herinaratra ary manafoana ilay sangan'asa amin'ny alàlan'ny famoahana tsiranoka hamolavola azy ho endrika tiana na endrika farany.
Rehefa miasa ao anatin'ny fandeferana tery takiana amin'ny indostrian'ny bobongolo dia zava-dehibe ny fametrahana ireo milina mety. EDM (Masinina famoahana herinaratra) Masinina manapaka tariby miasa miaraka amin'ireo manam-pahaizana momba ny milina voamarina sy ny departemantan'ny injeniera, manome ny General Manufacturing ny mari-pahaizana takiana mba hiasa ao anatin'ity orinasa ity.
Ny fikosoham-bary dia ny dingan'ny milina amin'ny alàlan'ny fanapahana rotary mba hanesorana ireo fitaovana amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fanapahana ho lasa sangan'asa. Izany dia azo atao amin'ny lalana samihafa amin'ny famaky iray na maromaro, ny hafainganam-pandehan'ny lohan'ny loha, ary ny tsindry.
Ho an'ny bobongolo marina, ny fahamendrehan'ny fampidiranay, ny Lifter, ny Slider ary ny faritra hafa amin'ny bobongolo dia tena zava-dehibe. Amin'ny ankapobeny, ny fahamendrehan'ny fikosohanay dia mila ao anatin'ny 0.005mm.
Mety bobongolo sy Assembly:
Misy ekipa 8 ao amin'ny atrikasa fivorianay bobongolo. Dimy amin'ireo lasitra bobongolo no tompon'andraikitra amin'ny famokarana lasitra fanondranana, ary ny vondrona telo hafa kosa dia nomanina ho an'ny lasitra fianakavianay.
Rehefa vita ny bobongolo lasitra, dia mila mamonjy ny bobongolo isika ary manosotra azy. Hamafiso fa ny kalitaon'ny lasitra dia afaka mahafeno ny fepetra fitiliana faran'izay haingana.